ကျောင်းမှလိင်ပညာရေးကိုမကျေနပ်ခြင်းသည်လိင်သတင်းအချက်အလက်အတွက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ (2019) - Your Brain On Porn
ကျောင်းကလိင်ပညာရေးနှင့်အတူမကျေနပ်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များအတွက်ညစ်ညမ်း (2019) ကို အသုံးပြု. နှင့်အတူဆက်စပ်ခြင်းမရှိပါ
ကိတ် Dawson, Saoirse NIC Gabhainn & Pádraig MacNeela
ရရှိထားသည့် 02 သြဂုတ် 2018, လက်ခံ 14 စက်တင်ဘာ 2018, အွန်လိုင်း Published: 08 ဇန်နဝါရီ 2019
ဒီလေ့လာမှုကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များအတွက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကောင်းသောလိင်ပညာရေး၏မရှိခြင်းထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းမကြာခဏကျင်းပယုံကြည်ချက်စူးစမ်းခြင်းနှင့်ထိုသို့သောဆကျဆံရေးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့လိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့အားဖြင့်တည်းဖြတ်ခဲ့သည်ရှိမရှိဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ လေ့လာမှုတစ်ပိုပြီးယေဘုယျပန်းတိုင်ကအိုငျးရစျတက်ကသိုလျကြောငျးသားမြား၏ညစ်ညမ်းကြည့်အလေ့အထများကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့ပဲ။ cross-section အရေအတွက်ဒေတာအိုငျးရစျတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတစ်ဦးအဆင်ပြေနမူနာအသက် 18-24 နှစ်ပေါင်း (ထံမှကောက်ယူခဲ့သည်n = 1380) ။ တွေ့ရှိချက်များကိုလိင်တူဆက်ဆံသူနဲ့ရိုးရိုးပါဝင်သူအများစုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များအတွက်ညစ်ညမ်းအသုံးပွုခဲ့, သူတို့ရဲ့လိင်ပညာရေးနှင့်အတူလျော့နည်းကျေနပ်မှုအစီရင်ခံတင်ပြပေမယ့်ကျောင်းက-based လိင်ပညာရေးနှင့်အတူမကျေနပ်ခံရခြင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များအတွက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမပြုခဲ့ကြောင်းပြသပါ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များအတွက်ညစ်ညမ်းသုံးပြီးလုပ်ခဲ့တယ်လက်ရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာနှင့်အတူ သာ. ကြီးမြတ်စိတ်ကျေနပ်မှုကြိုတင်ခန့်မှန်းပေမယ့်လိင်နှင့်လိင်ကျန်းမာရေးအကြောင်းပိုမိုသိရန် သာ. ကြီးမြတ်ရည်မှန်းချက်များနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်မဟုတ်။ တစ်ဦးချင်းစီမသက်ဆိုင်ကျောင်းမှ၎င်းတို့၏လိင်ပညာရေး၏သတင်းအချက်အလက်များအဘို့အညစ်ညမ်းသုံးနိုင်ပါသည်။
KEYWORDS: porn, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များ, လိင်ပညာရေး, တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ, အိုင်ယာလန်, လိင်တူချစ်သူ
ဆန်းစစ်ချက် FROM မှ Stats
ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်အိုငျးရစျငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်ပိုမကြာခဏများစွာသောအခြားနိုင်ငံများတွင်ထက်ညစ်ညမ်းနှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံညစ်ညမ်းထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများအတွက်တွန်းအားတစ်ခုအကွာအဝေးရှိသည်နှင့်ပထမဦးဆုံးအညစ်ညမ်းထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့် ပတ်သက်. အနောက်ပိုင်းကမ်ဘာပျေါတှငျအငယ်ဆုံးအကြားဖြစ်မည်အကြောင်းဖော်ပြသည်။ အမျိုးသမီးစုစုပေါင်း 90%, ယောက်ျား၏ 98.6% မှာတော့ 94 Non-binary ပါဝင်သူများ၏% နှင့်လိင်သင်တန်းသားများ၏ 80% သူတို့ညစ်ညမ်းမြင်ခဲ့ပြီးသောအစီရင်ခံ; သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏နမူနာထဲမှာ Non-binary သင်တန်းသားများနှင့်လိင်သင်တန်းသားများစုစုပေါင်းအရေအတွက်ကသေးငယ်တဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ နမူနာတစ်ခုကြီးမားသောအချိုးအစား 13 ယောက်ျား၏% နှင့်ဤအစီရင်ခံအမျိုးသမီး၏ 65.5% နှင့်အတူအသက် 30 နှစ်အောက်ပထမဦးဆုံးထိတွေ့ဆက်ဆံမှု, သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ နမူနာ၏ 45% ပထမဦးဆုံးအသက် 14 နှင့် 17 နှစ်အကြားကဤအကြောင်းပြချက်များအတွက်ညစ်ညမ်းသုံးပြီးအတူကွဲပြားတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ပထမဦးဆုံးအညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအသက်အရွယ်; 52% နှင့်အမျိုးသမီး၏ 9% ပထမဦးဆုံးအသက် 13 နှစ်အောက် masturbate မှညစ်ညမ်းအသုံးပြုခဲ့သည်။ ယောက်ျား၏တစ်ဦးကအများစုအမျိုးသမီး၏ 77% နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုမကြာခဏထိတွေ့ဆက်ဆံမှု (15%) သတင်းပေးပို့